UK ရဲ့ national bird တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
News » UK ရဲ့ national bird တဲ့	27
UK ရဲ့ national bird တဲ့
Posted by တောင်ပေါ်သား on Jun 11, 2015 in News, World News | 27 comments
ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး ၊ သတင်းလေးတွေ လိုက်ဖတ်ရင်း ဒီသတင်းလေး တွေ့လို့ပါ ၊
အဲဒီငှက်ကလေးကို နိူင်ငံကိုယ်စားပြုအထိမ်းအမှတ် ငှက်အဖြစ် လူပေါင်း ၂ သိန်းကျော်က ရွေးခဲ့သတဲ့ ၊
မဲအားလုံးရဲ့ ၃၄ % က ဒီငှက်ကလေးကို ရွေးတာပါတဲ့ ၊ ၁၂ % နဲ့ ဒုတိယက ဇီးကွက်ဗျ ၊
တစ်ခြားနိူင်ငံတွေမှာလည်း ရှိသတဲ့ ၊
အမေရိကန်က American bald eagle လင်းယုန် ၊ အိန္ဒိယက colourful Indian peacock ကဒေါင်း ၊
ပြင်သစ်က the Gallic rooster ကြက်ဖ ၊ သြစတြေးလျက အီမျူးငှက် တဲ့ ၊
Robin tops poll to find UK’s ‘national bird’
ဇီဇီခင်ဇော် says: ချစ်စာလေးးး
တောင်ပေါ်သား says: ဟုတ်ပဗျာ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: မြန်မာက.. အကောင်ကြီးကို.. ခြင်္သေ့အစား.. ဆင်လုပ်သင့်..။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ချစ်စာလေးညော်..
သားတို့တိုင်းပြည်မှာ ရော ဘယ်အကောင် ကိုယ်စားပြုလဲ ဟင်င်င်င်
တောင်ပေါ်သား says: သနားစရာကွယ် ၊ မကင်နဲ့ ၊ ကြော်စား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ခြင်္သေ့ကို …တော်တော်ကြီုက်သမို့.. ဘုရားရှေ့ထည့်…။
ခြင်္သေ့တကယ့်အကောင်လိုက်ကြီးက.. မြန်မာပြည်မယ်.. မရှိ..။
ဆင်ကတော့.. ယိုးဒယားအပါအ၀င်.. စိန့်တိုင်းနဲ့စစ်ဆိုင်တုံးကလည်း..စစ်ရေးမှာ တော်တော်အသုံးတည့်ခဲ့ပြီး..
တိုင်းပြည်အင်ပါယာချဲ့တာမှာ.. ပထမ။ဒုတိယ၊တတိယ စသဖြင့်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခဲ့ရာမှာ.. တော်တော်အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ သတ္တ၀ါမို့..။
မြစပဲရိုး says: Burmese Cat ဆိုပြီး တစ်ကူးတစ်က ကို နာမည်ပေးထားတာ ရှိတာမို့ ကြောင် ကို ရွေးကြပါလား။ lol:-))))
မြစပဲရိုး says: http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_cat
Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အင်းလေးကန်ထဲမှာ မြန်မာ့မျိုးရင်း ငါးပိစိပေါက်စတွေ ရှိသဗျ…
ငါးမပြောနဲ့ ကန်ကိုယ်တိုင်ကိုက ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတော့
သည်ဘက်ခေတ်ဆို အဲ့အကော်ငတွေ ကျန်သေးရဲ့လားတောင်မသိ…
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ဝန်းကျင်က မြန်မာ့မျိုးရင်း ရေပုတ်သင်တွေ အတော် အိပ်စပို့လုပ်ရတယ်..
အာ့တွေလည်း ခုခေတ်ဆို ဘိုင်အိုအင်ဂျင်နီယားရင်း နိုင်တဲ့ အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တွေမယ် သူရို့မျိုးရင်းဖြစ်အောင်
အော်ရိုဝါးနား မျိုးစိတ်တခု လည်း ထားဝယ်ဘက် တွေ့သတဲ့ ….
ရှေ့လျောက် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့ မဆိုနိုင်
ငါးသမားဖြစ်ဖူးလို့ မျိုးရင်း ငါးတွေအကြောင်း သိသလောက် လာပြောတာ….
kai says: ဗမာ့ငါးကတေ့ာ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်…။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အဲ့ဒါပြောမလို့…
ဧရာဝတီ လဗိုင် ကို အစိုးရအနေနဲ့ တကောင်လောက် ဆမ်ပယ်ဖမ်းပြီး ငါးပြတိုက်ထဲထားလို့ …ပတ်ဘလစ်ကို
ပိုတတ်နိုင်ရင် မျိုးစပ်ပြီး … အကောင်ဖောက်သင့်တယ်
အော်ရိုဝါးနားက … နည်းနည်းပိုဆက်ဆီဖြစ်တယ် သဂျီးရဲ့
အဲ့သည့်ငါးမျိုးက ဒိုင်နိုစောခေတ်ကတည်းက ရှိနေတဲ့မျိုးရင်းလေ…..
ဒိုင်နိုဆောကွယ်တာတောင် သူမကွယ်ဘဲ ကျန်ခဲ့တာ…
ကနေ့ခေတ် ဘိရုမာမယ် မျိုးဖောက်လို့ မရသေးတဲ့ ငါးမျိုး
(ဈေးကွက်အရလည်း) အမေဇုံမြစ်ဝှမ်းက ကောင်တွေနဲ့ ထင်ထင်ရှားရှား ကွဲပြားသမို့…
သီးသန့်ဖြစ်တည်မှု ဖြစ်နေတယ် ဆိုရမယ်ဗျာ….
Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: အမှတ်မမှားရင်.. ကချင်ပြည်က.. ကန်ကြီးတခုမှာ..(အင်းတော်ကြီးလို့ထင်..) ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအကြာဆုံးငါးမျိုးနွယ်တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်..။
မြန်မာတိုးရစ်ဇင်ကို.. အဲဒီလိုအကောင်တွေလိုက်ပြတဲ့ဖက် ပြောင်းယူသင့်သလို.. အဲလိုရှေးဟောင်းကန်တွေ.. သတ္တ၀ါတွေကို.. မျိုးရင်းထိမ်းသိမ်းဖို့လည်း.. ရံပုံငွေများများထား.. လုပ်သင့်လှတယ်…။
မြစပဲရိုး says: အဲဒါ ရော်ဘင် လို့ခေါ်ကြတယ် ကိုမျိုး။ :-)))
အပြင်မှာ စာကလေး ထက် တောင် သေးတယ်။
ခရစ်စမတ်ကဒ် လေး တွေ မှာ ပါတဲ့ အကောင်လေးပေါ့။
သေးသေးလေး။ ဆောင်းတွင်း မှာ ပိုတွေ့ရတယ်။
Ma Ei says: ငှက်ကလေးက ချစ်စရာလေး…
အိမ်က ပန်းပင်တွေပေါ်လာလာနား အကောင်ပလောင် အစာရှာတဲ့ ငှက်ကလေးတစ်မျိုးရှိတယ်…
နှံပြီစုတ်ထက်နဲနဲကြီးတယ်…၀မ်းဗိုက်ပိုင်း နီနီရဲရဲလေး…ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ချောင်းတာ တစ်ခါမှမရ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကျမကတော့ ရော်ဘင်ကို ရင်ပုံနီငှက် လို့ မြန်မာပြန်ပါတယ်
ကူမားရ် says: လူစကား နားလည်တယ်ဆိုရင် ယံနိုင်စရာမရှိ
ဗေတား မွေးစားမိဘတွေရှဲု back yard မှာ လူရှိရှိနဲ့ကို အစားလာစားတာ
အဲ ရန်ဖြစ်ရင်တော့ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် သေအောင် ကိုက်ဆိတ်ပြစ်တာ
မြစပဲရိုး says: ကိုဆွေ – ငှက်ကလေး တွေ လူစကား တတ်တာတော့ ဟုတ်မယ်မထင်။
ကိုဆွေ သာ ငှက်စကားတတ် တာ ဖြစ်ရမယ်။ lol:-)))
Ma Ma says: -စာကလေးလို့ ထင်နေတာ။
-အဲဒါကြောင့် မြစာကလေး ဖြစ်သလားလို့။
-သဂျီးပြောတဲ့ နိုင်ငံတော်အကောင်ကို ဆင် ဆိုတာ သဘောကျတယ်။
-အကောင်ကြီးတဲ့အပြင် လူကို အကျိုးပြုတဲ့ သတ္တ၀ါဖြစ်လို့။
-ခြင်္သေ့ကိစ္စကတော့ သတ္တိရှိတဲ့ တောတောင်ကိုအစိုးရတဲ့ တောရာဇာလို့ မှတ်ထားရာက ခုတလော -ဖဘမှာ သစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးတဲ့ ခြင်္သေ့ပုံကြည့်ပြီး မကြိုက်တော့ဘူး။
-ပန်းအနေနဲ့ဆိုရင် လမ်းဘေးမှာ အလွယ်တကူပေါက်နေ ပွင့်နေတဲ့ ပျဉ်းမပန်းကိုလည်း (ပန်းစာရင်းဝင်ရဲ့လားတောင်မသိ) ကြိုက်တယ်။ ခရမ်းရောင်မို့လို့။ -ငါးနဲ့ပတ်သက်ရင် ရေချိုငါးတွေဖြစ်တဲ့ ငါးရံ့၊ ငါးခူ၊ ငါးကြင်း၊ ငါးမြစ်ချင်း တွေကို တခြားနိုင်ငံတွေမှာ -(ကိုယ်သိသလောက်) မရှိကြဘူး။
-ပင်လယ်ငါးတွေသာ နိုင်ငံတကာမှာ ရနိုင်တာ။
-ဟိုးတုန်းက ပင်လယ်ငါးတွေလောက်သာ အိပ်စပို့လုပ်ကြတာ။
-အခုဆိုရင် ရေချိုငါးဖြစ်တဲ့ ငါးရံ့၊ ငါးခူ၊ ငါးကျီး တွေကို အိပ်စပို့ လုပ်နေကြပြီ။
-ရေချိုငါးက ပင်လယ်ငါးထက်စာရင် အရေအတွက် အကန့်အသတ်ရှိတယ်။
– အိပ်စပို့လုပ်ရင် ရေရှည်မှာ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက် ရင်လေးစရာပဲ။
kai says: “ဆေးဝယ်ရင် ဒီစူဇာမှာစိတ်ချရတယ်”လို့.. ကြော်ငြာစာသားရေးပေးတဲ့.. ဆရာသိန်းဖေမြင့်ကို.. အစိုးရက.. မြန်မာတွေရေချိုငါးချည်းနှိပ်မနေပဲ.. ပင်လယ်ငါးစားရအောင်သွားရေးခိုင်းတော့..
“ခေတ်မှီသူတိုင်း ပင်လယ်ငါးစားကြသည်”လို့.. ရေးပေးတယ်မှတ်ဖူးတယ်..။
ရေချိုငါးတွေ ပြစားကြ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ပင်လယ်ငါးက အကြောတက်တယ် သဂျီးရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: ရော်ဘင်ငှက် က ချစ်စာလေး
Mike says: .မြန်တျန့်ကိုယ်စားပြု ဧရာဝတီလင်းပိုင်ကိုသဘောတူသဗျ
manawphyulay says: မြန်မာပြည်မှာကော ဘယ်ငှက်က ကိုယ်စားပြုသလဲ လေးလေးမျိုး သိလားဟင်။ သိရင်ပြောပြပါလား။ ဗဟုသုတလေးတွေ မှတ်ထားချင်လို့ပါ။
တောင်ပေါ်သား says: သိပါဘူးဗျာ ၊
ဇီးကွက်ကိုတော့ လာဘ်ကောင်ဆိုလား ၊
ဒေါင်းကတော့ ဟိုးအရင်ကတည်းက အလံတွေမှာပါတာပဲ ၊
အောင် မိုးသူ says: ချစ်စရာလေးပါ။
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော် အချစ်ဆုံးကတော့… နေပြည်တော် တိလိတ်ဆန်ရုံထဲက..ခြင်္သေ့ဖြူဖြူကြီးတွေရယ်…
ပင်ဂွင်းငှက်တွေရယ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ခြင်္သေ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးလား ? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.